Qeybo kamid ah Ciidamadda Amisom ee Lageynaayo Gobolka Geddo – Radio Daljir
Juunyo 3, 2013 4:28 b 0
Geddo,03 June 2013,Gobolka Gedo ee koonfur galbeed Soomaaliya ?ayaa lagu wadaa dhawaan in loo daad-gureeyo ciidamo AMISOM ah, si ay u adkeeyaan amniga gobolkaasi sida ay noo xaqiijiyeen madax ka tirsan Ahlu-sunna Waljamaaca.
dhinaca kale isla deegaanno badan oo gobolka ka mid ah waxaa haatan ka socda hawlgallo dhinaca amniga la xiriira, waxaana socda qorshayaal sida la sheegay lagu maaggan yahay deegaanno cusub oo gacanta Dowladda Soomaaliya ka maqan in lagu soo celiyo.
madaxa dhinaca amniga ee gobolkaas Sheekh isxaaq Xuseyn Mursal ?oo lahadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamadaasi ay dhawaan imaanayaan qaar kamid ah degmooyinka gobolka Gedo oo qaarkood ?ay hadda gacanta ku hayaan kooxda Alshabaab.
Sheikh Isxaaq Xuseen Mursal ayaa dhinaca kale dowladda Soomaaliya ku dhaliilay taageero la?aanta ?mushaarkodhinta ciidanka ku sugan gobolka, ?iyo mas?uuliyiintooduba xilli la filayo in la mideeyo, ciidanka dowladda iyo kuwa Ehlusuna Waljamaaca.
ciidamada Dowladda Soomaaliya ay geenayso gobolka Gedo ayaa dad badani u fasirteen in dowladdu uga gol leedahay inay iyadu gacanta ku dhigto gobolkaas oo hadda ku tirsan maamulka Jubba-land.
C/weli Maxamed Shiikh?